Waxqabadka Dawladda ee isbuucii la soo dhaafay | warsanradio baydhabo
Home WARARKII MAANTA	Waxqabadka Dawladda ee isbuucii la soo dhaafay
written by warsan radio 09/05/2015
Mogadishu, 09 May 2015 – Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Mudane Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) ayaa ka warbixiyey horumarka Dowladda ee usbuucii la soo dhaafay.
Wasiirka ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin; Golaha Wasiiradda oo ansixiyey Guddiga Doorashooyinka, Guddiga Adeega Garsoorka iyo Guddiga Xuduudaha & Federaalka, Baarlamaanka Jubbaland oo la daahfuray, Wasaaradda Beeraha oo kormeertay Beeraha degmada Balcad, Taliyaha cusub ee Booliska oo xilkii la wareegey, Dowladda oo 25 Dhaawacyo ah u qaaday dalka Qatar, Waaxda Yusuf Al-Kowneyn ee Degmada Boondheere oo la dhagaxdhigay, Warbaahinta Dalka oo Horumar ku tallaabsatay iyo Ciidanka oo wada dhaqangelinta barnaamijka Xasilinta Dalka.
Golaha Wasiiradda oo ansixiyey Guddiga Doorashooyinka, Guddiga Adeega Garsoorka iyo Guddiga Xuduudaha & Federaalka
Shirka Golaha Wasiirrada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ee 7dii May 2015 ayaa waxaa shir guddoominayey R/wasaare Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, waxaana looga dooday guddiyo ay soo gudbiyeen wasaaradaha kala ah Cadaaladda iyo Arrimaha Gudaha & Federaalka, kuwaas oo dood dheer kadib la ansixiyey.
Guddiga adeegga Garsoorka
1. Caydiid Cabdullaahi Ilka-xanaf, Guddoomiyaha Maxkamadda Sare,
2. Dr Axmed Cali Daahir, Xeer-ilaaliyaha Qaranka,
3. Abuukaate Maryan Xaaji Cilmi Ibraahim, ururka Garyaqaannada Soomaaliyeed,
4. Shariif Sheekh Unnaa Maye, Bulshada Rayidka,
5. Abuukaate Prof Ciise Axmed Warsame, ururka Garyaqaannada Soomaaliyeed,
6. Axmed Cabdullaahi Xuseen, Bulshada Rayidka iyo
7. Sheekh Cismaan Ibraahim Axmed, Bulshada Rayidka ah.
1. Saciid Xaashi Warsame,
2. Maxamed Xasan Taani,
3. Xuseen Cabdi Aadan,
4. Saciid Cali Sheekh Maxamed,
5. Maxamed Axmed Nuur,
6. Cabdiraxmaan Cusmaan Dirir,
7. Maxamed Daahir Maxamuud,
8. Xaliimo Ismaaciil Cali, iyo
9. Khadiijo Cosoble Cali.
Guddiga Xudduudaha & Federaalka
1. Muuse Garad Cabdullaahi,
2. Liibaan Cali Sahal,
3. Maxamed Muxuddiin Sheekh Mursal,
4. Dr Cabullaahi Gacal Cabdi,
5. Abuukar Sheekh Cabdi Ibraahim,
6. Saciido Xasan Cusmaan,
7. Xuseen Xaashi Xasan,
8. Cabdi Khaaliq Cabdullaahi Xamsa,
9. Khaliif C/kariim Maxamed.
Xubnaha Guddiyada Doorashooyinka iyo Xuduudaha & Federaalka oo ka kooban 18 xubnood ayaa lagu saleeyey nidaamka awood qeybsiga ee 4.5. Wasaaradaha Arrimaha Gudaha ayaa u xilsaartay Guddi madaxbannaan oo soo kala saaray araajidii soo gaartay oo aad u tiro badnaa. Guddiga ayaa si hufan, cad-cad oo qeexan u soo xulay xubnaha ay u arkeen inay lahaayeen waayo aragnimo iyo Khibrad ku aadan howlaha xasaasiga ah ee horyaalla labada guddiba. Guddiyadan 3da ah ee Doorashooyinka, Adeega Garsoorka iyo Xuduudaha & Federaalka ayaa ah guddiyo muhiim u ah hiigsiga 2016.
Baarlamaanka Jubbaland oo la daahfuray
Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 7dii May 2015 si rasmi ah magaalada Kismaayo uga daah-furey baarlamanka cusub ee Maamulka Ku Meel Gaarka ee Jubbaland. Madaxweynaha ayaa u hambalyeeyey baarlamanka cusub sheegeyna inay tahay tallaabo lagu faani karo iyo horumar ay sameeyeen dadka ku dhaqan gobollada Jubbooyinka iyo Gedo. Madaxweynaha ayaa xusuusiyey mudaneyaasha cusub ee la soo xuley iyo hoggaankoodaba inay xoogga saaraan dib u heshiisiinta, isla markaana ay sameeyaan dadaal ay ku qancinayaan beelaha iyo qeybaha kale ee weli wax ka tabanaya qaabka baarlamanka loo soo xuley. Madaxweynaha ayaa hadalkiisa ku daray oo yiri si mustaqbal wanaagsan loo helana loo baahan yahay in dadku is cafiyaan, muujiyaanna dulqaad, taas oo abuuri karta kalsooni iyo is-aaminaad cusub oo dhex marta shacabka. Munaasabadda daah-furka baarlamanka cusub ee Jubballand ayaa waxaa kale oo ka hadley Madaxweynaha Jubballand, Mudane Axmed Maxamed Islaan, wasiirrada arrimaha dibedda ee Ethiopia iyo Kenya, iyo weliba mas’uuliyiin kale oo ka socdey Qaramada Midoobay, Midowga Afrika, IGAD iyo maamulka Puntland.
Wasaaradda Beeraha oo kormeertay Beeraha degmada Balcad
Sii hayaha xilka Wasiirka Beeraha ahna Wasiir ku-xigeenka mudane Cabdi Casiis Saalax Carmaan ayaa kormeeer 6dii May ku tagay degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha dhexe, iyadoo ay ku wehlinayeen mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, Agaasimaha guud ee wasaaradda iyo mas’uuliyiin kale. Ujeedada kormeerka ayaa aheyd sidii loogu kuurgali lahaa daruufaha ay qabaan beeraleyda degmada iyo xaaladda biya xireeenadii wabiga Shabelle oo aan mudo dheer dayactir helin. Wasiirka iyo wafdigiisa ayaa waxaa halkaa ku soo dhaweeyay gudoomiyaha degmada Balcad mudane Maxamuud Maxamed Saney iyo xubno ka tirsan beeraleyda degmada waxaana uu ka dhageystay beeraleyda caqabadaha ka haysta fatahaada wabiga Shabelle. Qaar ka mid ah beeraleyda degmada ayaa waxaa ay ka codsadeen dowladda federaalka ah in ay ka caawiso sidii wax looga qaban lahaa fatahaada wabiga Shabelle isla markaana dayactir loogu sameyn lahaa biya xireeenadii wabiga oo bur bur xoogleh uu ka muuqdo. Sii hayaha wasiirka beeraha ahna wasiir ku xigeenka mudane Cabdi Casiis Saalax Carmaan oo la hadlay beeraleyda Balcad iyo maamulka degmada ayaa waxaa uu sheegay in wasaaradu wado dadaal ay cabashadooda wax uga qabaneyso, si dadka deegaanka loogu helo adeegyadii bulshada ee lama huraanka ahaa sida in biyo xireenada ay noqdaan kuwa shaqeynaya.
Taliyaha cusub ee Booliska oo xilkii la wareegey
Munaasabad uu xilka kula waregaayay taliyaha cusub ee Ciidanka Booliska Soomaaliya, Sareeye Guuto Maxamed Sheikh Xasan Xaamud ayaa 6dii May 2015 lugu qabtay dugsiga tababarka ciidammada booliska Soomaaliyeed ee Gen Kaahiye. Xaflada ayaa waxaa ka qeyb galaywasiiro ka tirsan xukuumada Soomaaliya oo ay ka mid yihiin wasiirka amniga gudaha, wasiirka Caddaalada, xildhibaano, xeer ilaaliyaha qaranka, taliyaha ciidanka asluubta, taliyaha Ciidanka badda iyo marti sharaf kale waxaana dhamaan mas,uuliyiinta ka qayb gashay ay bogaadiyeen taliyaha cusub. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Sareeye Guuto Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa ballan qaaday in waxqabad muuqda uu la iman-doono isla markaana uu ka codsaday saraakiisha iyo mas’uuliyiinta guud ahaan in lagu gacansiiyo xilka loo dhiibay. Wasiirka Amniga Gudaha Soomaaliya mudane C/risaaq Cumar Maxmed ayaa dardaran u jeediyey taliyaha cusub waxaana uu u sheegay in looga fadhiyo wax qabad dhab ah iyo howl karnimo waxaana uu ka codsaday in qorsha howleedka hadda u dagsan ciidamada booliska Soomaaliyeed uu halkaa ka sii amba qaado.
Dowladda oo 25 Dhaawacyo ah u qaaday dalka Qatar
Wasaaradda Caafimaadka oo kaashaneysa Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Dhiirigelinta Maalgashiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa 5tii May 2015 markii seddexaad muddo laba bil gudahooda dalka dibaddiisa ugu dhoofisay dhaawac gaaraya illaa iyo 25 ruux oo waxyeelo kala duwan ay ka soo gaartay weeraro iyo qaraxyo hore uga dhacay dalka oo xaaladooda caafimaad dalka wax looga qaban waayay, kuwaasi oo lagu daweyn doono Isbitaallo ku yaala dalka Qatar. Wasiir kuxigeenka Caafimaadka Mudane Osman Mohamed Abdi (Daalo) ayaa uga mahadceliyay Amiirka Dowladda Qatar Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani iyo Ra’iisul wasaaraha Qatar Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khaliifa Al Thani dadaalka muuqda ee ay ku garab taagan yihiin Dowladda iyo Shacabka Soomaaliya, isagoo xusay in dhaawacyada lagu soo daweynayo dalka Qatar ay ku jiraan laba gabdhood oo Mataano ah oo isku dhegan. Wasiir kuxigeenka Caafimaadka, waxa uu bogaadiyay kaalinta bani’aadanimo ee dadkani dhaawacyada ah ay ku daweyneyso dowladda Qatar, iyadoo Dowladaha Isutagga Imaaraadka Carabta iyo Boqortooyada Saudi Arabia ay sidoo kale ay daweynayaan dhaawacyada qaraxyo ka dhacay Muqdisho, kuwaasi oo hadda xaaladooda caafimaad ay ka soo reyneyso. Wasaarada Caafimaadka ayaa ku howlan soo celinta adeegga iyo kaabayaasha caafimaadka dalka, si looga maarmo howlo caafimaad oo dalka dibaddiisa loogu safro.
Waaxda Yusuf Al-Kowneyn ee Degmada Boondheere oo la dhagaxdhigay
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Maqaalada Muqdisho Jeneral Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) ayaa dhagax dhigay Waaxda Sedexaad ee Degmada Boondheere. Guddoomiyaha Degmada Boondheere Qaasim Cabdulle Xasan Dheere ayaa bulshada Boondheere uga mahadceliyey qaabka ay iskugu xiran yihiin ugana qeyb qaataan Dhismaha Degmada Boondheere iyo Nadaafada. Ugu Dambeyntii Guddoomiyaha ayaa dhagax dhiga kaddib sheegay in Waaxda Shiikh Yuusuf Al-Kowneyn ay daganaayeen dad Shacab ah kadibna Looga saaray si nabad ah hadana loogu adeegayo danta guud wuxuuna wasaaradda Arrimaha Gudaha ugu Baaqay in ay iyaduna dayactirto dhismihii wasaaradda arimaha gudaha oo waaxda ku dhagan. Maamulka Gobolka Banaadir ayaa ku howlan dib u dhiska xaruumihii danta guud ee loogu adeegayo bulshada Caasimada oo heer wanaagsan maraya taasi oo ay mahdiyeen dadka ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir.
Warbaahinta Dalka oo Horumar ku tallaabsatay
3dii May 2015 ayaa Muqdisho waxaa ka furmay seminar 3 cisho socday oo looga hadlayey horumarka warbaahinta dalka. Munaasabada furitaanka oo lagu soo beegay maalinta xoriyadda saxaafadda caalamka ayaa Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka & Dalxiiska, Ururka Suxuufiyiinta Qaranka Soomaaliyeed, Hay’adda horumarinta warbaahinta caalamka ee dalka Finland ee magaceeda loo soo gaabiyo VIKIS iyo Hay’adda Relief International ayaa waxay si wadajir ah u qabanqaabiyeen siminaarka oo ay ka soo qeybgaleen wakiilo ka socda warbaahinta dalka, hay’adaha amniga, bulshada rayidka ah iyo hay’ado caalami ah. Wasiirka Haweenka & Horumarinta Xaquuqul Insaanka ayaana iyo Taliyaha Nabad-Sugidda Qaranka ayaa goob joog ka ahaa xafladii furitaanka. Kulankii markii uu dhamaaday 5tii May 2015 ayaa ka soo qeybgalayaasha waxa ay soo saareen War-murtiyeed lagu ammaanay doorka warbaahinta Soomaaliya oo maalin walba ku sii tallaabsanaya horumar, sidoo kale waxaa laga tacsiyeeyey wariyeyaasha naftooda ku waayey howlihii ay bulshada u hayeen. Waxaana la isla gartay in la xoojiyo aragtida dowladda Federaalka ee ah in Xoriyadda hadalku uu muhiim yahay, iyadoo dastuurkana uu si faahfaahsan u qeexayo xaquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo sida loogu baahan yahay in xoriyadda hadalka inay lama taabtaan tahay. Ugu danbeyntii ka soo qeybgalayaasha seminaarka ayaa isku raacay ugu baaqay Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka & Dalxiiska inay si deg deg ah isagu yeeraan dhammaan qeybaha bulshada gaar ahaan kuwa warbaahinta dalka, maamulada gobollada iyo dowladda federaalka iyo hay’adaha caalamka si loo qabto shirweyne qaran oo lagu diyaarinayo Istraatejiyada iyo Qorshaha 5ta sano ee Warbaahinta Dalka, tanoo loo arkay inay keeneyso wadashaqeyn dhab ah iyo dardar gelin horumarka warbaahinta dalka.
Horumarka dhaqangelinta barnaamijka Xasilinta Dalka
Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa 7dii May 2015 howlgalo lagu xaqiijinayo ammaanka ka sameeyay xaafadaha ay ka koobantahay magaalada Beydhabo ee xarunta gobolka Baay, iyadoo ciidamada ay baarayeen gaadiidka iyo guryaha ku yaala magaaladaasi. Howlgalka ayaa waxaa lagu soo qabtay dad aad u fara badan oo la tuhunsanyahay in ay ka mid yihiin Kooxda argagaxisada ah, iyadoo qaarkii lagu waayey danbina la sii daayey. Saraakiisha ammaanka ee magaalada Beydhabo ayaa sheegay in howlgalkani uu si xowli ah uga socday magaalada Baydhabo, howlgalkana uu qeyb ka yahay xaqiijinta amniga dadka shacabkana ay aad ula shaqeeyaan ciidamada. Dadka ku dhaqan magaalada Beydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa soo dhaweeyay howlgalada noocaan oo kale ah ee lagu xaqiijinayo amniga islamarkaana lagu baadi goobayo maleeshiyaad ka tirsan Kooxda nabad-diidka ah.
Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka & Dalxiiska,
Waxqabadka Dawladda ee isbuucii la soo dhaafay was last modified: May 9th, 2015 by warsan radio
Xidigii Ay Liverpool Ku Raad Joogtay Jay Rodriguez Oo Kooxdiisa Southampton Heshiis Cusub U Saxiixay
Madaxweynaha oo kula dardaarmay Taliyeyaasha Booliska iyo Asluubta adkeynta Ammniga
Wasaarada Haweenka ” Waa in la xaqiijiyaa qoondada Haweenka”
Dhageyso:-Malaaq Deerow oo Tacasiyo u Diray Dadkii ku Geeriyooday Qaraxgii Maanta Ka Dhacay Hotel Suxufi>>
Daawo Sawirada: Madaxweynaha KGS Oo Xafiiskiis Ku Qaabiley Wefdi Uu Hogaaminaayo Wakiilka QM Ee Somalia
Dhageyso:-waxaa qadka ku la tiigsanay gudoomiya odiyaasha dhaqanka ee gobalka bakool oo noogu waramaayey haladaha degaanadaasi ee gobalka bakool
Dhageyso:-SACIID CUMAR DAAHIR OO INDHOOLE AH OO KA CUDSADEY UMADA SOOMAALIYEED IN WAX UQABTAAN
Wareysi aanu layeelaney taliye ku xigeenka Ciidamada Boolika Gaarka ah ee Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Dhageyso:-Wareysi+ Afayeenka Kofurgalbeed Galbeed Soomaaliya Malaaq Deerow >>
Maamul cusub oo looga dhawaaqayo Hiiraan